Axmed Muude Xuseen Duqii hore ee Muqdisho oo geeriyooday – STAR FM SOMALIA
Axmed Muude Xuseen Duqii hore ee Muqdisho oo geeriyooday
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ku geeriyooday Allaha u naxariistii Duqii hore ee Gobolka Banaadir, kaasi oo in muddo ah ku xanuunsanaayay Isbitaal ku yaalo Muqdisho.
Duqii hore ee Gobolka Banaadir ee maanta geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Muude Xuseen, wuxuuna ku dhintay Isbitaal ku yaalo Muqdisho.
Mr. Axmed Mude waxaa uu ahaa nin labo mar noqday duqa magaalada Muqdisho isagoo markii hore ahaa 1958 iyo mar kale 1966, isaga iyo Xasan Abshir ayaa laga arkaa qof labo mar Muqdisho ka noqday duqa magaalada laga soo bilaabo Dr. Campani Remeo sanadkii 1936 ilaa Sheekh Yusuf Jimcaale Madaale 2016-ka.
Xuseen Muude waxaa uu Xildhibaan noqday doorashooyinkii dalka ka dhacay 1969-kii, isagoo ka soo galay doorashada Degmada Balcad ee Gobolka Shabellada dhexe.
Muude waxaa uu dhalay ilaa 17 caruur ah, 3 xaas ayuu ka tagay, waxaana uu ku dhintay xaafadda Huriwaa ee magaalada Muqdisho.
Michael Keating oo ka hadlay sharciga Xuquuqul Insaanka ee Madaxweynaha uu saxiixay